प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई जाली-झेली भनेपछि बैठकमै गुमाए संयमता - Sidha News
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई जाली-झेली भनेपछि बैठकमै गुमाए संयमता
कम्युनिस्ट पार्टी मूलतः विचार र सङ्गठन प्रधान मानिन्छ । बैठक छलफल, बहस यसका सौन्दर्य र सम्पत्ति हुन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विचार र संगठनबाट च्युत त हुँदैछ, बहस-छलफलबाट पनि विमुख हुँदैछ । पार्टी कमिटीका नियमित र आवधिक बैठकहरूप्रति पनि उसलाई रुचि देखिँदैन । बरु कोठे बैठक, समूहगत भेला–छलफलमै आफ्नो र आन्दोलनको भविष्य देख्‍न थालेको छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधानले ९ सदस्यीय सचिवालय सदस्यलाई ‘कोर अफ् द लिडरसिप’को मान्यता दिएको छ । कार्यकारी कमिटीको रूपमा परिभाषित पनि गरेको छ । विधानको धारा ५९ (२) अनुसार केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्नेछ । पार्टीको कामकाज र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ ।
तर नेकपाभित्र बैठक बस्नै संघर्ष गनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह र सरकारको भूमिकामा नरहेकाहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दा कमिटीको बैठक पेचिलो बन्दै गएको छ । बैठक बोलाउने अख्तियारी पाएका कार्यकारी अध्यक्ष नै दुई पाने पत्र बोकेर बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
शनिबार यस्तै परिदृश्य बालुवाटारमा देखियो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिएर बालुवाटार पुगे । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार कार्यकारी अध्यक्षले प्रचण्डले ओलीसँगको समझदारीमा बैठक आह्वान गर्न सक्छन् । बैठक बोलाउन ओलीले कुनै हालतमा सहमति नदिने अडान राखेपछि अरु सचिवालय सदस्यहरूलाई पछि लगाएर हारगुहार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।
स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा देखिएका यावत् समस्याको जड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको बहुमत सदस्यहरूले निष्कर्ष सुनाएपछि ओली क्रूद्ध बनेका थिए ।
अरूलाई त खासै रिस पोखेनन् । तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भने क्षुब्ध बनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई ‘तपाईं जहिल्यै जाली, झेली कुरा गर्नुहुन्छ’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
“तपाईं जहिल्यै गुटबन्दी गर्नुहुन्छ । सरकारलाई असहयोग गर्नुहुन्छ । जाली, झेली कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, “मैले कहिले बैठक नराख्ने भनेँ, तपाईं र मबीच बैठक राख्ने विषयमा नै त कुरा भएको छ । तर, तपाईं गुटबन्दीमै रमाउनुहुन्छ !”
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उलङ्घनका घटनाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
“तपाईंले स्थायी कमिटीका कुनै पनि निर्णय आत्मसात गर्नुभएको छैन । तपाईंबाट सुरुदेखि नै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उलङ्घन हुँदै आयो,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, “अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्ने वेलामा कार्यकारी अध्यक्ष मूलतः पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको होइन ? तपाईंमात्रै कहाँ कार्यकारी हो ? म पनि कार्यकारी हुँ भनेपछि मैले त्यतिवेलै स्थायी कमिटीको निर्णय उलङ्घन गर्ने ? उसो भए अहिले नै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउँ भनेपछि अपानि जारी गर्न तयार हुनुभएको होइन ?”
प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफूलाई जाली, झेलीको संज्ञा दिएपछि प्रचण्ड पनि क्रूद्ध बनेका थिए । र, संयमता गुमाएका थिए ।
प्रचण्डले बैठक राखौं भन्दा सधैं आलटाल गरेको, बालुवाटारमा बसेर गुटबन्दीमा रमाएको, प्रदेश नम्बर एकमा आफूनिकटको भेला राखेर पार्टी अनुशासन, निर्णयविपरीत स्थगित राखिएको र केन्द्रीय कमिटीले बहस खुला नगरिसकेको अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस चलाएको, एकट्ठा हुन आग्रह गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै ओलीलाई ‘महाजाली’ र ‘महाझेली’ भन्दै मुख फर्काएका थिए । र, सचिवालयका बहुमत नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा गुट बनाएको आरोप नलगाउन चेतावनी दिएका थिए ।